Dashiell Hammett anotendeuka makore gumi nemaviri nemana. Kubva pamakavha, makiyi, zvirimwa uye nezvimwe. | Zvazvino Zvinyorwa
Dashiell Hammett anotendeuka makore gumi nemaviri nemana. Kubva pamakavha, makiyi, zvirimwa uye nezvimwe.
Nhasi ndinopemberera iyo Bhavhudhe raSamuel Dashiell Hammett. Kana EA Poe inoonekwa sepiyona weiyo nhema nhema Naiye mutikitivha wake Dupin, Hammett ave achinzi baba. Aishanda akakurumbira mutikitivha sangano Pinkerton pakutanga uye gare gare akazova munyori we enganonyorwa, nyaya pfupi uye ekuratidzwa. Yaive zvakare a mukuru wezvematongerwo enyika.
Akagadzira mavara ekufananidzira emhando iyi se Sam foshoro, asiwo vaviri vemutikitivha Nick naNora Charles kana kuti mumiriri weE Continental. Ini ndinoongorora chimiro chake nebasa rake uye ndinosimbisa iwo akakurumbira mitsara kubva kumazita akadai se Iyo Maltese Falcon o Kukohwa kutsvuku.
1 Dashiell Hammett nebasa rake
1.1 Maitiro uye maitiro
1.2 Mamwe mazita
1.3 Zvimwe zvirevo
1.3.1 Kubva kuMalta Falcon
1.3.2 Kukohwa Kutsvuku
Dashiell Hammett nebasa rake
Akatanga basa rake rekunyora aine mamwe mapfupi enganonyorwa, akaburitswa kubva 1924 uye akaunganidzwa pasi pezita re Kubata kukuru. Muna 1929 akaburitsa Kukohwa kutsvuku, kubudirira kukuru kwakaguma Iyo Maltese Falcon ndokuenderera mberi Murume mutete o Iko kiyi yekristaro, pakati pevamwe.
Hammett akanyora mabasa akaisa hwaro hwenyowani uyezve ndokutarisa zvinyorwa zvinyorwa, nhoroondo yematsotsi, kunyanya, yeavo vakakurumbira hard boiled. Izvi zvinosiananiswa neruzivo rwematsotsi nekuburitsa zviitiko zvakawanda umo zvinhu zvakadai semhirizhonga yakanyanya kana bonde zvinopindira.
Su simba inozivikanwa muvanyori se Ernest Hemingway kana Raymond Chandler, imwe huru yemafashoni ake. Ndiwo zvakare iwo chaiwo masitayera anofambidzana nekusikwa kwemifananidzo, vatambi uye zvirongwa zvemanoveli ake. Laconic uye inofungidzira, Sarudza mashoma asi akakosha ruzivo kuti muverengi agone kuumba iwo mavara uye nharaunda.
Chimwe chinhu chakakosha chebasa rake ndechake chokwadi. Hammett anoziva chaizvo zvaari kunyora nezvazvo. Ziva iyo uori Nzanga yeAmerica munzvimbo dzakasangana senge idzo dzakasikwa mushure meiyo 29 crisis uye Kushushikana Kukuru, mamiriro ezvinhu maakaburitsa mabasa ake makuru. Iyo mhepo inopfuura uye inokurudzira yakadzika kusava netariro iyo inopinda mavara ake zvachose.
Uye chimwe chinhu chakamusiyanisa nevamwe vashandi veiyo genre, kunyanya avo vechikoro cheSaxon, ndechekuti haafarire michini uye nhanho dzekuferefeta mhosva, asi hunhu uye nzanga dzakarikomberedza kana riri shure kwaro. Iko kuravira kwe "munhu" wechinhu chematsotsi asiwo icho sangana nemanzwiro erudo ndizvo zvinonyanya kuratidza basa raHammett.
Iyo Maltese Falcon
Iko kiyi yekristaro
Ropa rine mari
Mumiriri weE Continental
Vanoverengeka vakaendeswa kubhaisikopo mushanduro dzisingakanganwike saiyoyo Iyo Maltese Falcon, iro jaya rakarairwa John huston muna 1941. Vakaita nyeredzi mariri Humphrey Bogart kunge akaoma uye anoshamisa mutikitivha Sam Spade, Mary Astor y Peter lorre. Gore rimwe gare gare Alan Ladd uye Veronica Lake vane nyeredzi Iko kiyi yekristaro nemutungamiriri Stuart Heisler, uyo script yake yakasainwa naHammett.
Asi pamberi, mumakore makumi matatu, William Powell naMyrna Loy Vakapa hupenyu kune avo eccentric uye mamirionea vaviri avo pamwe chete nembwa yavo Asta vakazvipira kugadzirisa kesi. Ivo vaive mavara Hammett akagadzirwa mune yake nyowani Murume mutete. Nhevedzano yemafirimu akagadzirwa ayo akatanga nawo Kudya kwemanheru kwemupomeri, naWS van Dyke.
De Iyo Maltese Falcon
Akangonyangarika ... Sechibhakera achivhura ruoko rwake.
Asi, nzwisisa, kana mwana akarasika, zvinogara zvichiita kuve nemumwe; pachinzvimbo, panongova neyeMalta imwe chete falcon
Ini handivatye uye ndinoziva zvakakwana maitiro ekubata navo. Ndo zvandiri kuedza kukuudza. Nzira yekuvabata nayo ndeyekuvapa kune akabatwa, mumwe munhu wavanogona kutakura zizi racho.
Handivimbe nemurume anoisa miganho. Kana iwe uchifanira kungwarira kuti usanwa zvakanyanya kupfuura zvakafanira, imhaka yekuti kana iwe uchinwa haufanirwe kuvimbwa.
Kana murume auraiwa nemumwe wake, anofanirwa kuita neimwe nzira. Hazvina basa kuti ndeupi maonero aungave nawo pamusoro pake. Akanga ari mumwe wake, uye anofanira kuita chimwe chinhu. Wedzera kune izvo basa rangu ndere remutikitivha. Eya, kana nhengo yenzanga yetikitivha ikaurawa, ibhizinesi rakaipa kurega mhondi ichitiza. Iri bhizinesi rakaipa kubva kune ese maonero maonero, uye kwete chete kune iyo yakasarudzika nzanga, asiwo kune ese mapurisa nemapurisa munyika.
De Kukohwa kutsvuku
Mari harisi iro dambudziko. Iwo ndiwo misimboti.
Kuti uwane zvaunoda, waifanira kupa vamwe zvaive zvako.
Chero ani anoponesa anokunda. Ini ndaigona kukubatsira iwe kuchengetedza mari nedambudziko.
Aizove akatendeseka, akananga sepoker yakananga kubva paacha kusvika mashanu, kudzamara arova jackpot. Akava mumwe wavo. Mukadzi wake akapererwa nemoyo murefu ndokumusiya.
Ndakanga ndisingazive, kana kumbofungidzira nyaya iripedyo, ndauya kuguta rino netsaona ndikakuwana. Shamwari dzekare, uye zvese zvinotaurwa, vanga vasina kumira kundibvunza panotanga kupfura
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Dashiell Hammett anotendeuka makore gumi nemaviri nemana. Kubva pamakavha, makiyi, zvirimwa uye nezvimwe.
Akanakisa Salman Rushdie mabhuku
Vanyori vakazvimirira II. Gabriel Romero de ilavila. 10 mibvunzo